छोराको लागि दुलही हेर्न हिडेकी लक्ष्मी संधैका लागि अस्ताइन्, आफन्तहरु घाइते !!
दुलेगौँडा । पोर्चुगलमा रहेका छोराका लागि दुलही हेर्न निस्केकी जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिका-८, गणेश टोलकी ४५ बर्षिया लक्ष्मी खाँड ठकुरी संधैका लागि विलिन् भइन् । आफन्त छिमेकीलाई निम्ता गरेर छोराको धुमधामसंग विहे गराउने उनको धोको पुरा हुन पाएन । आइतबार लक्ष्मीले माइती मावलीबाट आफन्तहरु बोलाएर छिमेकी ओमप्रकाश गुरुङको ग ३ च ६०१२ नम्बरको टाटा सुमो रिर्जभ गरी नौ जना भएर कुरिनटारको यात्रामा निस्केका थिए ।
छोरा आएपछि बुहारी भित्र्याउँने सपना बुन्दै यात्रारत उनीहरु सवार टाटा सुमो मुग्लिङ नपुग्दै दुर्घट्ना प¥यो । आबुखैरेनीस्थित ऐनापहरामा मुग्लिङबाट आँबुखैरेनीतर्फ आउँदै गरेको ग २ ख ३०७ नम्बरको बसले आफ्नो लेन छोड्दै सुमोलाई आएर ठक्कर दियो । सुमो राजमार्गबाट करिब १० फिट तल खस्यो । दुर्घट्ना लगत्तै उनीहरुलाई प्रहरी रस्थानीयले उद्धार गरी चितवनस्थित पुरानो मेडिकल भरतपुर पु¥याइए पनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिए । एकै ठाँउका ४५ बर्षिया लक्ष्मी ठकुरी, चालक ३६ बर्षिय ओमप्रकाश गुरुङ र ७३ बर्षिय रुद्रबहादुर सेन ठकुरी (बाबुराम) संधैका लागि अस्ताए ।
मृतक चालक गुरुङ नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङ गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्री हुदाँ सवारी चालक थिए । गुरुङको श्रीमती र एक छोरी छिन् ।
दुर्घट्नाको खबरपछि छिमेकी पिताम्बर खाँतीले आफुहरु सम्पुर्ण टोल तथा वडावासी शोकमा परेको बताए । ‘खुसीको क्षणमा यस्तो दुःखद खबर सुन्न प¥यो’, हामीलाई अझै पत्यार लागेको छैन’-उनले भावुक हुदै भने-‘छोरा छिट्टै पोर्चुगलबाट आउदै रैछ, छोरा आउँदा केटी ठिक्क पारेर राख्ने योजना थियो । के दशा लाग्यो यस्तो खै ?
एउटै टोलका तीनको सवारी दुर्घट्नामा ज्यान गएपछि गणेश टोल शोकमा छ । दुर्घट्नामा सुमोमा सवार लक्ष्मीका आफन्तहरु शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ निवासी दिपेन्द्र शाही, ५२ बर्षिया गोमा शाही, ४१ बर्षिया बिनु शाही, पोखरा महानगरपालिका-३२, लामेआहालका राम शाही, उनकी श्रीमती ज्ञानु शाही र शुक्लागण्डकी-५ बस्ने दामोदर पुरी घाइते भएका छन् ।घाइतेहरुको पुरानो मेडिकल भरतपुरमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीको अनुसार घाइतेहरुको स्वास्थ्य अवस्था मध्यम छ ।
त्यस्तै, बसमा सवार पाँच जना घाइते भएका छन् । आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ बस्ने २८ वर्षीया देविका थापा मगर, सोही ठाउँका १८ वर्षीया आरती खवास, पिप्ले बस्ने बर्ष ३३ की हिरा बसेल, गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–१ बस्ने ३८ वर्षीया दिनमाया नेपाली, शहीद लखन गाउँपालिका गोरखाका शेरबहादुर थापा घाइते भएका थिए ।
प्रहरीका अनुसार घाइतेमध्ये तीन जनाको सामान्य उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन् । दुई जनाको भरतपुरमा उपचार भइरहको छ । बसले ठक्कर दिएको सुमो राजमार्गदेखि १० फिट तल भिरमा खसेको प्रहरीले जनाएको छ । ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट बस आफ्नो लेन छाडेर सुमोलाई ठक्कर दिएको बुझिएको छुु-प्रनाउ खड्काले भने-‘थप अनुसन्धान हुदैछ ।’ बसका चालक प्रहरी नियन्त्रणमा छन् ।
२०७८ चैत्र ३, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 131 Views